Saudi Arabia na-etinye ego na ọdịnihu ugbu a na 100+ Cultural Initiatives
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » Saudi Arabia na-etinye ego na ọdịnihu ugbu a na 100+ Cultural Initiatives
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Saudi Arabia na FII
Na Future Investment Initiative (FII) na Riyadh taa, osote onye na-ahụ maka ọdịbendị, His Excellency Hamed bin Mohammed Fayez, gosipụtara ndepụta dị egwu nke ihe omume omenala 100, ntinye aka na ihe omume na-eme na Alaeze ahụ tupu njedebe nke afọ.
Usoro dị egwu ma dị iche iche gụnyere ọtụtụ ihe omume nke ụlọ ọrụ omenala 25 nke Ministry of Culture malitere kemgbe mmalite ya afọ 3 gara aga.
HE Fayez kwuru na a na-ekpughe omenala Saudi na ume n'ogo na ọsọ ọsọ na-enwetụbeghị ụdị ya.
Ọchịchọ Alaeze ahụ na-enye ọtụtụ ohere maka ma ụlọ ọrụ nkeonwe na nke mba ụwa.
"Nke a bụ oge na-atọ ụtọ maka ọdịbendị na Saudi Arabia. N'ime izu ndị na-abịa naanị, anyị ga-anabata mmemme ihe nkiri mbụ nke mba ụwa, ihe ngosi nka mbụ anyị na mmemme mba ụwa dị ka Fashion Futures na MDLBeast, ”ka Fayez kwuru na nke FII. "Ihe omume ndị a na-esite na ọganihu Alaeze ahụ na-aga n'ihu iji zụlite mmepụta ihe na ịmepụta akụ na ụba omenala na-ekpo ọkụ n'Alaeze ahụ." Saudi Arabia amalitelarị itinye aka na ụlọ ọrụ mmepụta ihe zuru ụwa ọnụ.
N'ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke ọganihu ngwa ngwa na ọchịchọ ọhụrụ, Ministri ahụ ewepụtala atụmatụ nke ga-emepe ohere itinye ego omenala ọhụrụ site na PPP ma ọ bụ nkwonkwo nkwonkwo, na-akwado akụrụngwa gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ma mee ka iwu dị mfe iji kwe ka azụmahịa na-eme nke ọma. Tinyere ọchịchọ na-eto eto maka ọdịbendị n'ofe Alaeze ahụ, mgbanwe ahụ Odida obodo Saudi Arabiae ejidelarị ndị na-etinye ego na mba ụwa.
HE Fayez mere ngwa ngwa ịkọwapụta na ọrụ nke Ministry abụghị nanị n'ịkwalite ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ime ala eze kamakwa n'ịbawanye na ịkwalite àgwà mgbanwe omenala na ndị ọgbọ ya zuru ụwa ọnụ.
Fayez kwuru n'oge mkparịta ụka panel ya, "Enwere m mpako nke ukwuu na Alaeze ahụ na-eme mkpọsa nke ọma maka omenala na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ka ha bụrụ akụkụ nke mkparịta ụka na G20. "Ọ malitere n'oge ọchịchị Saudi n'afọ gara aga wee gaa n'ihu, nke pụtara na anyị achọpụtala na omenala nwere ebe na-adịgide adịgide na echiche G20 ma bụrụ akụkụ nke atụmatụ akụ na ụba ụwa."